Degmooyin badan oo doonaya in ay dhillinyartooda udiraan Norwayd - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Marie Söderlund waa darawalad gaadiid xamuul oo shaqo ka heshay isla markiiba Norweyd. Sawirle: Johan Prane/Sveriges Radio
Degmooyin badan oo doonaya in ay dhillinyartooda udiraan Norwayd
Dhallinta Iswedhen ee u tahriibeysa Norweyd
La daabacay måndag 26 november 2012 kl 14.25
Kadib markii ay soo shaac-baxadey in degmada Söderhamn dhallinyarada shaqo la'aanta ah ku taageerto dhaqaale oo ay weliba degmado ka caawiso dhallinyartooda sidii ay ugu guuri lahaayen dalka Norwey oo ay uga shaqeysan lahaayeen, ayaa hada waxaa jira degmooyin kale oo doonaya in ay ku deydaan.
José Perez Johansson oo ka socda mashruuca wada-shaqeyneed oo la yiraahdo Nordjobb ayaa heshiis lagalay lix degmooyin oo deris la ah Söderhamn gobalka Gävleborg län.
- Waxaan maleynayaa in ay heystaan dhallinyaro badan oo shaqo la'aan ah oo u dhiganta tan heysata degmada Söderhamn maadaama ay hada diryaar u yahiin in ay tareenka ayaguna dhankooda ka fuulaan.
Sabab Gävleborg. Miyeysan jirin degmooyin kale wadanka intiisa kale oo arintaan xiiseynaya?
- Haa, wey jirtaa xiiso dhanka koonforeed ee Iswedhen, gobolka Skåne waxaan ogahay in ay jiraan degmooyin badan, xataa Mälardalen iyo Dalarna waxaa noo socdo wada hadal, ayuu yeri.
Ilaayo hada sannadkaan inta lagu jirey waxaa keliya ee heshiis la galay Nordjobb lix degmooyin oo katirsan Gävleborg oo ah gobolka ugu shaqo la'aanta badan Iswedhen; si dhallinyarta gobolkaas mashruucaan shaqo uga helaan dalka Norweyd.
Iskugeyn 150 dhallinyaro oo shaqo la'aan ah ayaa loo diyaariyey guri iyo shaqo dalka Norweyd. Inteysan dhallinyaradaan u socdaalin Norweyd waxaa laga caawinayaa sidii ay tacliintooda u dhameystiran lahaayeen, sidoo kale waxaa laga bixinayaa qarashka socdaalka, bisha ugu horeysa markey Norweyd tagaan waxaa la dejinayaa deegaan lacag la'aan ah. Oslo markey garaana waxaa loo sameynayaa qof siiya taageero iyo talo.
- waxaan aaminsanahay in furaha guusha arintaan ay tahay in ay heli doonaan taageero iyo talo bixin markey mashruucaan galaan iyo ilaa inta ay shaqo ka helaan.
Dhallinyaro badan oo ku dhow boqol mar-horena ka tagtay Söderhamn ayaa si dhaqso ah ku helay shaqo. Mid kamid ah dhallinyartaas waa Marie Söderlund.
- Haa, si dhaqso ah ayaan ku helay, markaan shaqada dalbadey hal saac kabacdii wey i soo waceen waxayna dhaheen waan rabnaa in aad noo shaqeysid, ayey tiri.
Markii dhamaadkii bisha Oktober radiyaha Iswedhen shaaciyey farsamada cusub ee degmada Söderhamn ee ay ku dhimayaan shaqo la'aanta dhallinyarada ayaa waxay ka kicisey xiiso meel ka baxsan xadka Iswedhen. Gaar ahaan dalka Norweyd oo ay hada shaqo bixiyaahso isku deyayaan sidii ay u soo jiiden lahaayeendhallinyarada Iswedhen.
Waxay toos ula soo xiriireen maamulka degmada Söderhamn, ayagana anaga ayey noo soo gubiyaan sidii aan ugu sameyn laheyn gule ay ku kulmaan shaqo bixiyaasha Norweyd iyo dhallinyarta Iswedhen, sidaas waxaa yeri José Perez Johansson.
Hadaa shaqo la'aantahay ma u raadsan laheyd shaqo Norweyd hadii lagaa cawinayo sidaas shaqo ku heli laheyd iyo weliba deegaan?